Resaky ny mpitsimpona akotry : tombontsoa tsy mifamaly | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : tombontsoa tsy mifamaly
Mbola lavitra ezaka vao ho tonga izany fitateram-bahoaka lavorary izany. Telo tonta ny vondrona voakasiky ny fitateram-bahoaka. Mazava ho azy fa eo ny mponina izay mila azy io ahafahany mivezivezy eo amin’ny fanatanterahana ny adidy isan-karazany, eo ny fanjakana izay tompon’andraikitra mikasika ny fandravonana ny fiainam-bahoaka ary eo ireo mpandraharaha tsy miankina nametrahana an’io adidy io.
Mody tsotsotra ny fametrahana ny resaka, fa sarotra rehefa alalinina. Tsy hoe misitraka fotsiny ny vahoaka fa ny fanatanterahan’ny tsirairay ny adidy tandrify azy dia antoka ho fiodinan’ny toe-karen’ny firenena, izany hoe mitaky fanamorana sy fandaminana ny fivezivezeny eo am-panatanterahana ny andraikitra andavanandro. Tsy fanompoana vahoaka koa no anjaran’ny sehatra tsy miankina fa fitadiavana no antony anaovany ny fitaterana na misy aza ny fepetra tsy maintsy arahana. Any amin’ny firenena mandroso moa dia mandray anjara amin’ny fomba samy hafa ny fanjakana na ara-bola na momba ny fandaminana mba hahitan’ny mponina sy mpandraharaha rariny, tsy hampidangana mihoatra ny fahafaha-mividin’ny vahoaka ny saran-dàlana ary mba hahitan’ny mpandraharaha tsy miankina tombom-barotra. Araky ny tazana anefa matetika dia manao fametsifetsena fotsiny sady miala andraikitra ny fanjakana. Fanambarana no betsaka : fanampiana atsy, fanomana tramway ary fanafarana fiara fitaterana manara-penitra avy any Sina… Hevitra taingina hatrany, tsy ampy fandinihana, tsy mahavaha ny olana anio, tsy mitsinjo ny fisehon’ny ampitso.
Isak’izay mandeha izao dia ifampisintonana ny adivarotra mikasika ny fanondrotana ny saran-dàlana. Miverimberina lalandava izany, manampy trotraka ny tebiteby sy ny korontana eto amin’ny fiaraha-monina izay efa tsy milamina. Film efa niseho ary mbola hitranga anefa io tazana amin’izao fotoana izao raha mbola tsy mahavita azy eo amin’ny fametrahana tetika mitombina tsara dinika ny fitondrana. Firy taona izao no efa nandaniam-bola izany minisiteran’ny Fitaterana izany fa mandrak’ity ny androany, tsy mbola hita taratra izay tolotra famahana olana mateza momba izany fitateram-bahoaka izany na mikasika ny fitaterana am-bohitra amin’ny taksibe na mikasika ny fitaterana manevatseva ny nosy amin’ireo taxi-brousse sy ireo kamiao tsy ara-dalàna.